प्रधानमन्त्री नै संघीयताको पक्षमा छैनन्ः बाबुराम – Karnalikhabar
बुटवल । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् ।
मगर राष्ट्रिय परिषदको संघीय भेलाको शनिबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीसंगै कांग्रेसका केही नेताहरुले आफूसँग भएको भेटमा संघीयता नमानेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका केही नेताहरुले हामीले त संघीयता मानेकै थिएनौं, तपाईले के भिराइदिनु भो भन्नुहुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
उनले आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाका अधिकार र भ्रष्टाचारको विरुद्ध फेरि एकपटक सशक्त आन्दोलन उठ्ने दावी गरे । ‘हामी विप्लवजीहरु जस्तो बन्दुकै उठाउने, देश अस्तव्यस्त गराउने गरीह होइन । तर पहिचान, अधिकार र भ्रष्टाचारको मद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं’ भट्टराईले भने, ‘वाइडबडी भ्रष्टाचार, बुढीगण्डकी भ्रष्टाचार, अन्य मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रीत गर्ने, सेना परिचालन सुरक्षा परिषदको वैठक विनै गर्ने, ठूला परियोजना सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गर्ने जस्ता कुराहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’
नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुको नाम मुछिएपछि वाइडबडी प्रकरण सामसुम पारिएको उनको दाबी छ ।
अघिल्लो - दिल्लीविरुद्ध जितको खोजीमा बैंग्लोर, टिममा पर्लान् सन्दीप ?
बझाङमा बन्न लागेको अनाथ बालगृहका लागि राजेश हमालले दिए एक लाख सहयोग, सहयोगी मनलाई फेरी पनि धन्यवाद - पछिल्लो